श्रीमानले आफ्नो इच्छा पुरा गर्न नसकेको भन्दै श्रीमती पर पुरुष संग सल्किएपछी … – sudursanchar2
श्रीमानले आफ्नो इच्छा पुरा गर्न नसकेको भन्दै श्रीमती पर पुरुष संग सल्किएपछी …
August 3, 2021 AdminLeaveaComment on श्रीमानले आफ्नो इच्छा पुरा गर्न नसकेको भन्दै श्रीमती पर पुरुष संग सल्किएपछी …
झापा जिल्लाको शिव सतासी नगरपालिका वडा नं.८ स्थित डुँडाबारीमा भन्ने ठाउँका एकजना व्यक्ति चन्द्र श्रेष्ठको श्रीमति विदेश जाँदै आउँदै गरिरहेकी थिइन्। बउनी विदेश गएदेखि चार पाँच पटक जति आउँदै जाँदै गर्दैआइरहेकी थिइन्। तर पछिल्लो समय यता उनले आफ्नो श्रीमानसँग त्यति नबोलेर छोरासँग बोल्दै आइरहेकी थिइन्। अहिले त्यी नै श्रीमती आफ्नो श्रीमान र छोरालाई छोडेर अर्कैसँग बिराटनगर गुद्री बजारमा भएको जानकारी पाइएको छ।
उनले मिडियाको सम्पर्कमा आएपछि भनिन्,आफूलाई श्रीमानले विदेशबाट दुई वर्षमै आइज भनेर बोलाए को,अनि घरमा आउँदा उ नबोलेको आ’रो’प लगाएकी छिन्। उनले विदेशबाट पैसा पनि पठाएकी र छोराछोरी लाई मोबाइल समेत पठाएको दाबी गर्दै अहिले पनि छोराछोरीले आफूसँग बस्न चाहेमा राख्न तयार भएको बताएकी छिन्। उनले अर्को बिहे गरेर बसेको पनि स्वीकार गरिसकेकी छिन् भने अब आएर श्रीमानलाई डि’भो’र्स दिने पनि जनाएकी छिन्।
उनको तीन जना छोराछोरी छन्। ठूलो छोरा २० वर्ष पुगिसक्यो भने अर्की छोरी १८ वर्ष पुगिसकेकी छिन्। छोराछोरीको बिहे गर्ने उमेरमा हिँडेकी उनलाई नपुग्दो केही देखिँदैन। उनी पहिले विदेश जाँदा पनि उनले नजान भनी निकै नै प्रयास पनि गरे र नमानेपछि उनले जान पनि दिए।उनी विदेश गएदेखी श्रीमानलाई सम्पर्क गर्दिन थिइन्।एकै चोटि घर आउँदा मात्रै उनको सम्पर्क हुने गर्दथ्यो।
पछिल्लो समय गएदेखी यता चाहीँ उनी सम्पर्कमा नआएर अन्तै हिँडेकी थिइन् । उनका साथीहरूले भिडि योमा सम्पर्क गर्दा उनको नानी भएको देखिएको थियो भनेर उनकै साथी हरूले बताएका छन्। श्रीमान भन्छन्, मैले पहिले पनि निकै सम्झाएको थिएँ र नमाने पछि तँ जे गर्न मन लाग्छ गर,सुख पाएर बस् भनेर पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि मैले कहिँ कतै छे भन्ने थाहा भएमा र सम्पर्क भएमा उसलाई टिको लगाएर नै विदा गरिदिन्थे।
विदेशबाट आउँदा पनि पाँछ सय हजारको रिचार्ज कार्ड किन्ने र इमो खोल्ने र श्रीमानकै अगाडि जोसँग पनि के खायौ ? के गर्दै छौ? भन्दै बियर खाँदै कुरा गर्ने गर्दै पनि आइरहेकी थिइन्। उनलाई नपुग्ने कुरा खास केही थिएन। श्रीमानले यसरी नबोल भनेर निकै सम्झाउ ने गर्दथे पनि तर पनि उनको केही लागेन। जोसँग फोनमा कुरा गर्दा पनि ब्यालेन्स लगाइदे भन्ने गर्दथिन्।
अहिले उनले आफ्नो श्रीमानसँंग डिभोर्स नगरीकन अर्को बिहेगरेर गएकी छिन् भनिएको छ। श्रीमानले आफ्नो नाममा जग्गा नाम सारी गर्दा किन त्यसो गरेको भन्दै उनले बबाल समेत गरेकी थिइन्। आफ्नो श्रीमान लाई तँ तेरो केटी ले म मेरो केटा ल्याउँछु बीचमा बारेर बस्छु समेत भनेको श्रीमानले बताएका छन्। कृपया उनै श्रीमान्सँग गरिएको विस्तृत कुराकानी यहाँ तल प्रश्तुत गरिएको छ हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला,धन्यवाद।****** पुरा समाचार हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
सुजिता प्र’ करण : ह’ त्या आ”रोपमा उनकै बुबा प क्राउ
सरकारी जागिर खुल्यो ? छिटो भन्दा छिटो यस नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस, यसरी दिनुहोस् आवेदन?
आज रातिदेखि ९ दिनसम्म कडा लकडाउनको घोषणा ! भर्खरै आयो यस्तो खबर !